Netra Visual Intelligence: Nyochaa Nleta Gị Anya Online | Martech Zone
Netra bu mbido na-emepe emepe Nchoputa onyonyo onyonyo dabere na nyocha AI / Deep Learning emere na MIT Computer Science na Artificial Intelligence Laboratory. Sọftụwia Netra na-eweta usoro ihe osise a na-edozighi na mbụ na nghọta doro anya. N’ime milliseconds 400, Netra nwere ike tinye ihe oyiyi eserese maka akara ngosi njirimara, onyonyo onyonyo, na njirimara mmadụ.
Ndị ahịa na-ekerịta foto 3.5 na mgbasa ozi ọha na eze kwa ụbọchị. N'ime ihe onyonyo ndi mmadu kesara bu ihe bara uru banyere ihe ndi ahia, ihe ndi ha choro, ihe ndi ichoro, mmekorita ya na ihe ndi di ndu.
Na Netra, anyị na-eji AI, ọhụụ kọmputa, na mmụta miri emi iji nyere ndị na-ere ahịa aka ịghọta nke ọma ihe ndị ahịa na-ekereworị; teknụzụ anyị nwere ike ịgụ ihe onyonyo n'ọtụtụ oke ọ na-agaghị ekwe omume. Iji mezuo nke a, anyị na-amalite site na nlele nke onyogho achọtara na ntanetị nke nwere otu akara. Anyị na-ewere, sịnụ, akara ngosi Starbucks, wee gbanwee ya ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji mepụta usoro ọzụzụ nke ga-eme ka teknụzụ mata logos Starbucks gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ na ebe ndị mmadụ juru dị ka ụlọ ahịa kọfị. Mgbe ahụ, anyị na-azụ ụdị kọmputa ahụ site na iji nchikota nke ihe ndị dị n'ime ya na ihe oyiyi gbanwere. Richard Lee, Onye isi, Netra
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke ihe oyiyi Netra software ingested si Tumblr. Ọ bụ ezie na nkọwa ahụ ekwughị The North Face, Sọftụwia Netra nwere ike i scanomi foto ahụ ma chọpụta ọnụnọ nke njirimara ahụ n'etiti ihe ndị ọzọ nwere mmasị, gụnyere:
Ihe, ihe nkiri, na mmemme ndị dịka ugwu, Summit, Adventure, Snow, na Winter
Nwoke ọcha dị afọ 30-39
Ulo oru akara North Face nwere obi ike 99%
Netra na-enye ndị ahịa ohere ị nweta ntanetị nke webụ iji bulie onyonyo na / ma ọ bụ nyochaa onyonyo mmekọrịta sitere na Twitter, Tumblr, Pinterest na Instagram. Sọftụwia a na - azụ ahịa maka ndị ahịa site na dashboard nke web ma ọ bụ API maka ụlọ ọrụ ngwanrọ nke ụlọ ọrụ. Enwere ike itinye n'ọrụ teknụzụ Netra tinyere ntinye ederede na nchọta (njikwa akụ dijitalụ) na nyocha anya.
Ndị ọrụ nwere ike ịlele nchịkọta na akara ngosi ihe oyiyi ma zaa ajụjụ ndị dị mkpa dị ka:
Ebee ka akara m na-egosi na ihe osise na olee gburugburu?
Kedu onu ogugu mmadu na-etinye aka na akara m na onyonyo?
Kedu ụdị igwe mmadụ na ndị ahịa m na-eme?
Kedu ihe omume / akara bụ ndị na - azụ ahịa na - emetụta akara m nwekwara mmasị na ya?
Ndị ọrụ nwere ike iyo ihe onyonyo dabere na ọkwa aka yana ọnọdụ nke foto ahụ. Netra nwekwara ikike ịmepụta ndị na-ege ntị na-adabere na ọdịnaya ndị etinye na ntanetị mgbasa ozi. Dịka ọmụmaatụ, Reebok nwere ike iji sọftụwia ahụ lekwasịrị ndị na-azụ ahịa anya bụ ndị na-arụsi ọrụ ike site na Crossfit ezubere iche maka ndị na-eziga foto nke onwe ha na-emega ahụ na izu abụọ gara aga.
Anyị kwenyere na anyị nwere teknụzụ kachasị mma na ahịa na akara ngosi akara ngosi. Anyị na-egosipụtakwa onwe anyị site na ike njirimara njirimara ọzọ. Enwere otu ụlọ ọrụ ọzọ nwere ike ịme akara, akara ngosi, ihe, ọnọdụ, na ụmụ mmadụ, nke ahụ bụ Google. N'isi anyị na isi nyocha, anyị na-eme okpukpu abụọ ka mma karịa ha. Ngwọta ọgụgụ isi nke Netra nwere ike ịnye data bara oke uru iji bulie data ndị ahịa dị (dịka ozi profaịlụ, nkọwa ederede, data kuki) nke ndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ adịworị leverage. Richard Lee, Onye isi, Netra
Ngwa bara uru gụnyere nlekota oru ika, ige ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe, ịkwado mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịmetụta mmetụta, nyocha ahịa na mgbasa ozi.
Rịọ ohere ka Netra
Tags: ainlekota orummụta miri emiọdịdị ihu udeoyiyi udeinstagramngwa igwenetraPinterestàgwàmmatareebokihu ugwutumblrTwittervisual image udenyocha anya
Mia: Nyocha gbasara azụmahịa, iguzosi ike n'ihe, na CRM